Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Wayaanaha (Gumaysiga Itoobiya) oo Tacadiyo Kagaystay Somalia.
Posted by Dulmane	/ July 27, 2016
Kadib fashilo isdaba joog ah oo ciidamada wayaanaha kasoo wajahay gudaha iyo dibada wadanka waxaa meel xun
gaadhay wada shaqayntii hay’adaha dowliga ah ee wayaanaha iyo lashaqayntii dowladaha aduunka oo hada khaati kataagan dhaqanka xun ee xukuumada wayaanaha, Sitoo kale waxaa soobadanaya eedaymaha ay dowladaha aduunku usoo jeedinayaan tacadiyada ay xukuumada wayaanuhu kagaystaan gudaha iyo dibada wadankaba.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya ee sida sharci darada ah kujooga wadanka Somalia ayaa lagu soo waramayaa in ay tacadiyo kala duwan kagaysteen wadanka burburku lahadhay ee Somalia, Sida ay sheegayaan dadka siyaasiyiinta ah ee matala dadka Soomaaliyeed ciidanka gumaysiga Itoobiya ayaa tacadiyo kagaystay wadanka Somali gaar ahaa Gobolada Bay iyo Bakool.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa ideecada Shabeelle Midia usheegay in ay ciidamada Itoobiya dad shacab ah kulaayeen deegaan hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay. Sida uu xildhibaanku sheegay ciidamada Itoobiya ayaa 14 qof kudilay tuulada Wardiinaay sidoo kale ciidanka wayaanaha ayaa tacadi kagaystay meelo kale oo Somalia kamid ah.
Dhinaca kale Ururada iyo hay’adaha udooda xuquuda bini’aadamka ayaa ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee kusugan
gudaha wadanka Somalia ku eedeeyay in ay si aan kala sooc lahayn ugumaadaan dadka shacabka ah ee somaaliyeed, sidoo kale Hay’adahan iyo Ururadan ayaa sheegay in ay ciidanka Itoobiya shacab laayaan iyagoo mar marsiinyo uga dhigaya in ay ladagaalamayaan dad hubaysan.
Sida aan wararkaanagii hore idiinku sheegnay wuxuu khilaaf xuni soo kala dhex galay hogaanka sare ee ciidamada
gumaysiga wuxuuna taliska guud diiday kaalmo uu kadoonayay Genaral Yohanis oo ah taliyaha ciidamada wayanaha ee kusugan Somalia, arintan ayaa timid kadib markii ciidanka gumaysiga ee Somalia loosoo jeediyay eedayn ku aadan habdhaqan kooda iyo dagaalo ay kuwiiqmeen oo lala galay.
Ciidamada wayaanaha ayaa caado ahaan looga bartay in ay jabka dagaalada kasoo gaadha kajaraan dadka shacabka ah waxaana laxasuustaa gumaadka joogtada ah ee ciidanka wayaanuhu kagaysto Ogadenia iyagoo qaab aar goosi ah ulaynaya shacab ka aan waxba galabsanin ee Soomaalida Ogadenia.